5 Siyaabaha cadaadi Video ah oo kala duwan Video kombaresarada
Video hawadda: 5 Siyaabaha cadaadi Video ah
Waxaa jira badan isticmaala weydiiyo su'aalo isku mid online ku saabsan sida loo cadaadin video ah, oo aad ka heli badan oo tan oo jawaabo kala duwan, halka jawaabta hoose waa in la helo a video hawadda ku haboon. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira ugu yaraan 30 ku haboon komberesarrada video aad heli kartid ka dib markii Googled. Waxaa laga yaabaa inaad ku wareertay aniga oo kale, maxaa yeelay, midkoodna samayn kartaa go'aanka aad u. Maxaad samayn kartaa waa in la helo hab fiican ku xiran tahay ujeedooyin kala duwan.
Siyaabo kala duwan oo ku cadaadisaa Video ah
1. Haddii aad rabto in aad cadaadin video ah oo si qaab ku habboon oo markaa la wadaagto on YouTube / Facebook / vimeo si toos ah, waxaad u baahan kartaa Converter video sida Wondershare Video Converter Ultimate ah. here hubi hagaha faahfaahsan >> Download version maxkamad free hoos ku qoran.
2. Haddii aad u baahan tahay inaad soo afjarin video dhererka la jaro, qalab qaybsama u qaybsiga fiican Whatsapp, waxaad isku dayi kartaa editor video sida Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor).
3. Haddii aad rabto in aad kaliya xirfadle video hawadda taagan oo keliya si ay ula qabsadaan fursadaha sida aragti pixel marka qaabka ay u resize file video sokeeye email ah, Sorenson Media Tuuji 9 waxaa lagu talinayaa (maxkamad version Free ma ordi karaan taagan oo keliya, waa suurtowdaa u baahan tahay inaad kala soo baxdo QuickTime Player hore).
4. Waa maxay Haddii aad u baahan tahay qalabka tafatirka yar oo kaliya u baahan tahay ciyaaryahano qaar ka mid ah / raadiyayaal in ay dib ugu ciyaaro video? Isku day QuickTime Player (Keliya Version Pro taageerada compressing video files) iyo Mac Finder.
, Sidaas oo ka mid ah waa uu ka fiican? Halkan waxaan jeclaan lahaa in la wadaagto natiijada imtixaanka aan halkan. Background, waxaan ka helay filim 5.9G magacaabay gudbiyeyaasha - Dark of Moon ah (! Haa tahay, waxaad ogaan filimkan, sidoo kale waxaan jeclahay) ka saaxiibkey laakiin waxaan doonayaa inaan u raaxaysan ee pc gurigeyga. Sida ugu wanaagsan ee ay tahay in cadaadin movie si size yar ka dibna qaado la adag-drive. Shuruudaha My fudud: qaadi la size yar, ha samaynina wax khasaaro badan video tayo leh oo aan ka maqnaan doona goobaha movie kasta. Ha isku day kor ku xusan 5 fursadaha ku salaysan goob la mid ah la isla ujeeddadaas - cadaadisaa file MKV ah in file MP4 ah.
Size (ka dib riixo)
Time si ay u cadaadi
Tayada (ka dib riixo)
$49.95 2.3 GB 05:00:12 Wanaagsan, xal sare 1920 * 1080
$39.99 2.3 GB 03:36:15 Good, xal 680 * 480
Sorenson Media Tuuji 9
$ 549 3.2 GB 04:25:18 Wanaagsan, xal sare 1920 * 1080
$29.99 4.3 GB 06:25:18 Dhexdhexaad, xal 680 * 480
$ 0 4.5 GB 07:01:19 Dhexdhexaad, xal 680 * 480
Screenshots markii Compressing Videos la Tools waxay:
Cadaadi video ah leh Wondershare Video Converter Ultimate
Cadaadi video ah leh Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Cadaadi Video ah oo la Sorenson Media Tuuji 9
Cadaadi Video ah oo la QuickTime Pro
Cadaadi Video ah oo la Mac Finder
Qaybaha in ay saameeyn ku Size Video ah (Extension Reading)
Inta aynaan sii, waa in aan ognahay waxa xubno saameyn ku yeelan kartaa video size ka dibna waxaan ka heli kartaa siyaabo fiican ah si aad ku gaarto.
Pixel aragti - file Like image, file video sidoo kale uu leeyahay cabbirada pixel, ugu weyn aragti Pixel yahay, ka weyn file video uu noqon doono. Qaado SD iyo HD tusaale ahaan, mid ka mid ah sababta ugu wayn ee files HD waa ka weyn SD yahay dhinacyada hore waa 1.920 X 1.080, halka ay tahay oo kaliya 720 X 480 pixels.
Mudada Video - Tani waa Xubnihii ugu cad waxaad ka heli kartaa oo resize kartaa video files in qaar ka mid ah kordhiyo iyo in sababta gacmaha cagaaran qabaa sida ugu wanaagsan oo degdeg ah ku cadaadisaa video ah waa in la gooyaa dhererka video ah. Si kastaba ha ahaatee, waa adag tahay in nafo ah sharafta iyo Hufnaan waqti isku mid ah marka la gooyaa dhererka.
Rate jir ah (15, 24, 25, 30 ama wax kasta) - heerka jir ah ka dhigan tahay sida joogtada ah waa loox muhiimka ah. Inta badan telefoonada smart taageeraan 30 loox kasta labaad (ie 30 fps) videos halka filimada ugu waaweyn ee jira 24 barnaamij fps iyo TV yihiin 25 fps, waxaa jira dhowr videos 15 fps hadda ka dib bandwidth dedejisay in 3G. Muddooyinka kala duwan si toos ah saameyn ku yeelan karaa video le'eg. Iska yaree 30 fps videos in 15 ka dibna video size waa laga gooyn laga yaabaa in kala bar.
Progressive, oo isdhaafsan ama Entropy Frames - siyaabo kala duwan si ay u keyframe la codecs kala duwan sidoo kale waxay saameyn kartaa size video, halkii loox horusocod ah oo isdhaafsan, horumarinta yihiin dhiiran tahay in ay entropy loox si aad u hesho waayo-aragnimo fiican video.
Constant ama Doorsoome Streaming Bitrate - Qaado dhexena iyo RMVB tusaale ahaan, oo labadoodaba waxaa ka waxa sameeya Real Network, taas oo Radidiyaha karaa RealPlayer. Khadka dhexena waxa ay taageertaa geeyo bitrate joogto ah, taas oo ka dhigi kartaa hubiyo in il siman hoos bandwidth xadidan. Si kastaba ha ahaatee, RMVB iska leh geeyo bitrate variable, oo kartaa deg deg ah inta u dhaxaysa bitrates kala duwan iyo badbaadin bitrates dheeraad ah oo damacyadii adkayn sida gabyaya oo cayaaraya, coasters iyo dagaal, oo waxay keentaa daawashada saamayn fiican. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay inta badan ka yar dhexena.
Rate Sample Audio - Marka aan ka hadlo video files, waxaa jira ugu yaraan 2 qaybood - video iyo maqal ah. Sidaa darteed, tayada audio sidoo kale saameyn ku yeelan kara oo dhan size file video ah. Heerka muunad Audio waa element ugu muhiimsan, kaas oo loo qaybin karaa ilaa 3 fasalada sida 22,05 Khz, 44,1 Khz iyo 48 kHz. Fasalka Sare gaaro natiijo fiican audio, taas oo macnaheedu yahay weyn video size.
Siin Tayada - Guud ahaan, mid ka mid ah ma diidi doona sare u abaalmarin tayada markii daawashada filim, gaar ahaan filimada 3D. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale u ballaadhiyo kartaa video files markii kor u abaalmarin tayo leh marka khariidad.
Sidee ku cadaadisaa Videos la Sorenson Media Tuuji 9
Top 5 Free Video komberesarrada
Sida dhaqsaha badan Video Converter: Beddelaan Video in qaab kasta oo
HD Video Player: Sida loo Play HD Video
> Resource > Video > Video hawadda: 5 Siyaabaha cadaadi Video ah